बलात्कार लगायत यौनजन्य अपराध नियन्त्रणमा रेडलाइट एरियाको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ कि ? – डा डी आर उपाध्याय
दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बलात्कारले सिंगो समाजलाई स्तब्ध पार्ने गरेको छ । तीन वर्ष उमेरकी बालिकादेखि पचपन्न वर्षकी वृद्धासमेत बलात्कृत भइरहेका छन् भने सात आठ वर्षका बालकदेखि सत्तरी वर्षीय वृद्धबाट समेत बलात्कार भइरहेको देखिन्छ ।
सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँचले विश्वलाई एकातिर ठूलो उपलब्धि हासिल गराएको छ भने यसको दुरुपयोगबाट समाजमा अनेकौं विकृति–विसंगति बढ्दै गएका छन् । फेसबुक, इमेल, मोबाइलबाट सजिलै सम्पर्क स्थापित गरेर विभिन्न हत्कण्डा अपनाई बलात्कार गर्नेहरु धेरे भेटिन्छन् । यसका साथसाथै तथ्यांकहरुबाट खुलासा भएअनुसार आफन्तबाटै बलात्कृत भएका बालबालिका तथा किशोरीहरुको संख्या बढी छ ।
दैनिक सरदर पाँचजना बलात्कृत हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ ।
सुरक्षा निकाय लगायत हजारौं गैरसरकारी संस्थाहरु बलात्कारलाई निरुत्साहित गर्न, नियन्त्रण गर्न, न्यून गर्न लागिपरेका छन् । तर अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन । बलात्कारका जति घटना उजागर हुन्छन् त्यसभन्दा बढी विभिन्न कारणवश लुकाइने गरेको कटु यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
बलात्कारको यस भयावहतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यो सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने सवाल बन्न पुगेको छ । यस सम्बन्धमा पंक्तिकारले केही सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ । यो सुझावमात्र हो यसलाई कुनै किसिमबाट अन्यथा अर्थमा नलिइदिन पंक्तिकारको आग्रह पनि छ ।
पौराणिक कालमा नगरबधूको प्रचलन रहेको हामी पढ्न–सुन्न सक्छौं । यसैलाई निरन्तरता दिंदै आधुनिक समाजका अनेकौं विकसित राष्ट्रहरुले कानुनी मान्यता दिएरै देह व्यापार गर्ने निश्चित क्षेत्र तोकेर रेडलाइट एरियाको नामबाट सञ्चालन गर्न सुरु गरे ।
क्यानाडा, थाइल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, मेक्सीको, अमेरिका, नेदरल्यान्ड जस्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुमा सुविधापूर्ण वेश्यालय सञ्चालन गर्न छुट्टै इलाका तोकिएका छन् । अर्कोतिर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा रेडलाइट एरियामा देहव्यापार गर्न अनुमति दिइएको छ । भारतको कोलकातामा सोनागाछी, मुम्बईमा कमाठीपुरा, पुनेमा बुधवार पेथ, इलाहाबादमा मीरगन्ज, दिल्लीमा जीबी रोड, मुजफ्फरपुरमा चतुर्भुजस्थान, नागपुरमा इतवारी र वाराणसीमा शिवदासपुरका वेश्यालयहरु चर्चित छन् ।
अनेक कालखण्डमा समाजका अगुवाहरुले बलात्कार नियन्त्रण तथा यौन तृष्णाका कारण उब्जने विभिन्न सामाजिक अपराध नियन्त्रण एवं न्यून गर्नका लागि आंशिक रुपमा देहव्यापारलाई स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।
एक दृष्टिकोणले हेर्दा यो उचित पनि देखिन्छ । लुकीछिपी गर्ने देहव्यापारले समाजमा नै घुसपैठ गरेर जताततै आफ्नो जरो पैmलाउँदै गएकोमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । गरिबी र अशिक्षा तथा विलासी जीवनप्रति बढ्दै गएको आकर्षण एवं मोहले गर्दा हजारौं किशोरी युवती परोक्ष अपरोक्ष देह व्यापारमा संलग्न हुने गरेका छन् । राजधानीमै पटक पटक यस्तो आरोपमा दर्जनौं युवकयुवती प्रहरीद्वारा पक्राउ हुने गरेका छन् ।
त्यसैले घना बस्तीबाट पृथक सीमित क्षेत्रमा देहव्यापारका लागि रेडलाइट एरिया छुट्याई दिंदा सिंगो समाजमा यो विकृति पैmलन नपाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसबारे पटक पटक बहस पनि हुने गरेको छ । यौन तृष्णा मेटाउने स्थानको अभावमा यौनेच्छाले उग्ररुप लिंदा हुने गरेको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य अपराधहरु रोकथाम गर्न रेडलाइट एरियाको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ । तर यस सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य तथा सावधानी अपरिहार्य छ ।
(लेखक वेश्यावृत्ति समस्या एवं समाधान विषयमा विद्यावारिधिबाट विभूषित हुनुहुन्छ)
– २०७६ भदौ २७